Xildhibaanno aad uga naxay weerarka Maka al-Mukaramah oo ugu baaqay shacabka iney isgargaaraan – Kalfadhi
Xildhibaannada Labada Gole ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa Barahooda Bulshada ku muujiyey sida uu u xanuujiyey weerarka qaraxa weyn ku bilowday ee uu dagaalka fool-ka-foolka ah xigay, kaas oo ka dhacay Hoteel Maka al-Mukaramah ee magaalada Muqdisho xalay fiidkii.
Weerarkan, oo soo gaaray duhurnimadii maanta, waxaa la xaqiijiyey iney ugu yaraan ku dhinteen 20 qof, 100 qof ka badanna ay ku dhaawacmeen, iyadoo ay ku baaba’day hanti ay ka mid tahay guryo, gaadiid iyo agab ganacsi oo kala duwan.
Wakiillada ayaa sheegay iney aad uga naxeen weerarkaas oo, si isku mid ah in badan oo ka mid ah, ay ku tilmaameen inuu ahaa bahalnimo. Waxay dadka dhintay ugu Alla baryeen naxariis, kuwa dhaawaca ahna caafimaad deg deg ah, iyaga oo inta kale ugu duceeyey badbaado.
Axsaabta Siyaasadda, Madax ka tirsan Dowladda Federaalka Soomaaliya (DFS) iyo masuuliyiin kale, oo hogaamiya hay’do dowli ah ama aan ahayn, ayaa sidoo kale weerarkaas cambaaraayey. Waxay shacabka ugu baaqeen iney isgargaaraan, iskuna duubnaadaan.
Xildhibaannada iyo Xubno Mucaarada qaar waxay dowladda ku dhaliileen iney gabtay ilaalinta amaanka shacabka, laakiin ilaa iyo hadda hay’adaha amnigu wali kama hadlin, war rasmiyana kama soo sareen weerarkaas salfada naf iyo maalba.
Dadka Muqdisho ayaa Baraha Bulshada ku wadaagaya aaraa ku saabsan weerarkaas iyo sida ay halis ugu tahay weerarada la midka ah ee kusoo noqnoqday caasimadda, iyagoo istusinayey iney shacab iyo dowladba ka seexdeen ilaalinta amaamka Muqdisho.